IINGCAMANGO EZINGAMA-66 + ZETATTOO EZINQAMLEZILEYO [ISIKHOKELO SOKUPHEFUMLELA SIKA-2021] - UHLOBO
Eyona tattoos zingcono ezingama-66 + zoMnqamlezo ngo-2021
Dlula phantse kuyo nayiphi na icawa kwaye uya kubona into ibenye: Umnqamlezo oqaqambileyo ngaphakathi kwesakhiwo okanye ngqo ngaphandle kwendawo yonqulo.
Yisimboli esingapheliyo esifumaneka kwizintlu ze-50 + zeengcamango ze tattoo.
Umnqamlezo uhlehlela yonke indlela ebuyela kwinkulungwane yesi-5 kunye nexesha apho ubuKristu baqala ukungena njengenkolo enkulu. Xa ucinga ngobuKrestu, ukhunjuzwa ngokubethelelwa emnqamlezweni kunye nendoda eyaziwa ngokuba nguYesu kunye nendlela yokubulala ebandakanya ukubethelelwa emnqamlezweni ngomthi njengesohlwayo.
Yintoni enomdla kukuba zombini imiqolo emi nkqo nethe tyaba yayikholelwa ukuba imele izimvo. Indawo ethe tyaba yabonwa njengowasetyhini, ineengcinga zentshabalalo, ukufa kunye nomhlaba. Umqadi othe nkqo wawunxulunyaniswa nobudoda-umbono wokuba ungunaphakade, uyasebenza, kwaye uzele bubomi.
Nangona kunjalo xa kufikwa kwi-Celtic cross tattoo izinto ezahlukileyo. Kungaphezulu kwesimboli sokholo lwamaCelt kunye nelifa, kufana ne-rosary tattoo. Xa ubona i-Celtic cross tattoo, bahlala bedibanisa iilogo, amaqhina kunye ne-mazes kuyilo.
Iqhina leCeltic limela ikhonkco phakathi kokomoya kunye nokwenyama. Imiphetho kukuphela kwesangqa, kwaye i-tattoo yomnqamlezo eyahlukileyo isibonisa iindlela ezahlukeneyo esizithathayo ebomini.
Ayisiyiyo yonke iminqamlezo yamadoda eziyilo lweetatoo zonqulo; umnqamlezo wesizwe unokuba ngumrhumo kukhokho okanye kwisizwe, ngelixa ukukhula komnqamlezo weGothic kudibanisa i-inki nentlungu nomsindo.
Nokuba sithini na isizathu sakho, i-tattoo yomnqamlezo omangalisayo iya kuvusa unxibelelwano olunzulu kwinto oyimeleyo kunye nokubonelela ngetattoo kwabanye, njengoko uluhlu ngalunye lwe tattoo oluhle lomnqamlezo kolu luhlu luya kungqina.
1. I-Celtic Cross Tattoo Iingcamango
Bona ngakumbi malunga - Iingcamango eziphezulu zeCeltic Cross Tattoo
Zimbalwa iindlela zoyilo ezinqamlezileyo ezaziwa kwangoko njengomnqamlezo weCeltic. Ngelixa lo mfanekiso ungafunyanwa kwimisebenzi yobugcisa nakwi tattoo yeCeltic evela kwihlabathi liphela, eyona mvelaphi iyinyani kunye nentsingiselo yolu phawu lwakudala zihlala ziphikisiwe.
Abaphengululi abanakuvuma nokuba ngubani owazisa umnqamlezo owahlukileyo waya eIreland kwasekuqaleni, nangona ibali lisithi uSt.
Abanye ababhali bakholelwa ukuba isangqa esiphambanweni simele uthixo waseLangeni u-Invictus, ngelixa abanye besithi simele i-halo kaYesu xa wabethelelwa emnqamlezweni.
Esinye isikolo sokucinga kukuba umnqamlezo yinto nje ebambekayo kwiinkolo zobuhedeni, umfanekiso odibanisa umnqamlezo oxhobileyo ngaphakathi kwesangqa-uphawu oluqhelekileyo kwizithethe ezininzi zobuhedeni-kunye nomnqamlezo wamaKristu.
2. Ukuwela iiTattoos kwaMadoda
Bona ngakumbi malunga - Iimpawu eziPhezulu ezingama-87 eziMnqamlezo eziPhezulu zaMadoda
Kubantu abaninzi umnqamlezo ufuzisela ukholo, kwaye ukholo luyaziwa ukuhambisa iintaba. Kukho uluvo oludumileyo lokuba iindlela ezilula zithetha intle ngokunxulumene ne tattoo yomKristu.
Kodwa ngaba iiTattoo ezinqamlezileyo kufuneka zibe zihlazo? Njengamaphiko eengelosi umnqamlezo wamaKristu unokwenziwa ngokwezifiso. Zininzi iindlela zokuncedisa ukwenza i-tattoo yomnqamlezo elula ipholile.
Umthandi womvambo unokutshintsha izinto, ongeze umphumo emnqamlezweni, asebenzise nasiphi na isicelo sobuchwephesha, enze ukusuka kuhlobo olusekiweyo lomnqamlezo - umnqamlezo waseMalta, umnqamlezo wamaGrike, umnqamlezo wesiLatin okanye umnqamlezo weTau yimizekelo nje ethile - okanye ungazinza ngomthi umnqamlezo okanye umvambo olula owenziwe nge-3d okanye ngefuthe elibi.
3. Umnqamlezo weTattoo yoyilo yaBasetyhini
Umthombo: @ johnb.designs nge-Instagram
Umthombo: @droppedouttattoo nge-Instagram
Umthombo: @savvas_ktm nge-Instagram
Umthombo: @albertinkgenium nge-Instagram
Umthombo: @alexleedestroyer nge-Instagram
Bona ngakumbi malunga - Iingcinga eziPhezulu zeTatoo ezingama-63 zabafazi
I tattoo yangoku yabasetyhini ikhokelela kwisitayile esitsha kunye nokubekwa kweengcinga zomzimba.
I tattoo yomnqamlezo eyaziwayo yomKristu inika ithuba lokuyila elinomdla kwi-inki esekwe kwinkolo kwaye ibonisa uluhlu lwezinto onokukhetha kuzo ngeziqwenga ze-epic.
Nokuba luyilo olulula kwi-inki emnyama okanye iziqwenga ezingaphezulu ze-inki umnqamlezo uvumela iingcinga ezinomfuziselo we tattoo ukubonisa inkolelo yomqokeleli kuThixo.
4. Iingcamango ezilula zeTattoo
Bona ngakumbi malunga - IiTattoos ezingama-51 ezilula zoMnqamlezo
Ungakhumbula ubomi bomhlobo okanye ilungu losapho ngokuba nomzobi we-tattoo umnqamlezo olula kunye nesibhengezo kuwo uqaqambisa igama labo ukubenza baphile kwimemori yakho.
Mhlawumbi unqwenela ukubonisa ukholo lwakho kuKristu, ngaphandle kokukhanya okanye ubuqaqawuli beetattoos. Umnqamlezo omncinci womthi, uhlobo lwe-inki emnyama, okanye umvambo wenkcubeko ofanelekileyo ziindlela ezintathu ezifanelekileyo zokubonisa ukholo ngale ndlela.
Nokuba yeyiphi impembelelo ye tattoo oyikhethileyo, yazi ukuba ukucoceka kwemigca ecocekileyo kunye nokuphunyezwa okulula okuvela kumculi onobuchule kunokwenza eyona mifanekiso iphantsi ukuba ibe ngumvambo womnqamlezo oqaqambileyo onokuthi uzingce ngawo.
5. IiTattoos ezincinci zomnqamlezo
Umthombo: @dubaitattooallday nge-Instagram
Umthombo: @peargrutattoo nge-Instagram
Umthombo: @ jean_duran29 nge-Instagram
Umthombo: @ dave.vacuink nge-Instagram
Umthombo: @lukastichanek_tattoo nge-Instagram
Bona ngakumbi malunga - Iingcamango ezingama-69 eziPhezulu eziPhezulu zeTattoo
Ngeetattoos indawo ebalulekileyo yokuzihombisa kunye nokubonakaliswa kwenkululeko yokuzikhethela, abo banengqondo yezenkolo bathabathe ubugcisa bomzimba ukubonisaukholo lwabo.
Uyilo lomnqamlezoluphawu olubonakalayo kwangoko, olulula nolusebenzayo nokuba yitattoo encinci okanye encinci yomnqamlezo. Kunye neBhayibhile eNgcwele umnqamlezo yeyona nto ibonakalayo yobuKristu kunyeukuyainentsingiseloumvambo wokomfuziseloukhetho.
Yindlela yekhonkrithi yokubonisa ukholo lwakho kuyilo lwetattoo wonke umntu unokuqonda kwaye aqonde kwangoko, nangona kunjalo, kwabanye ukuba bakwazi ukufihla umnqamlezo omncinci okanye umbono omncinci we tattoo ngokuxhomekeke kwimeko kubaluleke ngakumbi kunentamo yomvambo wentamo okanye isiqwenga somqolo esipheleleyo.
6. I-3D Cross Tattoos
Bona ngakumbi malunga - Uyilo lweTatoo ezingama-50 ze-3D
I-tattoo yomnqamlezo omangalisayo kwi-3D uyilo olufanelekileyo kwabo banqwenela umda wokuyila kumvambo wabo.
I-tattoo yomnqamlezo we-3D inokunxitywa naphina emzimbeni, ngakumbi iindawo ezibaluleke njengentliziyo (njenge tattoo esifubeni) kunye neendawo zokubethelelwa (izihlahla kunye namaqatha),okanye njengenxalenye enkuluumkhonoI tattoo ebandakanya eminye imifanekiso yonqulo efana neengelosi amaphiko okanye iBhayibhile.
Uqeshwe ngononophelo usebenzisa ugoso oluthambileyo kunye namacala axhonyiweyo, umnqamlezo we3D ubonakala uphakame kancinci ngenkangeleko. Inika umbono wokungaphezulu kobugcisa be tattoo, kodwa ubungqina bendlela yokuphila nokholo onokukhunjuzwa ngalo lonke ixesha.
iiTattoo zeminwe ezincinci zabafana
7. I-Anchor Cross Tattoos
Bona ngakumbi malunga - I-Anchor Cross Tattoo Iingcamango
Uyilo lomnqamlezo we-anchor luphawu lwendalo yonke lokholo kunye nokholo, nokuba yeyiphi indlela ohamba kuyo. Luphawu lomntu oqondayo kwaye ahloniphe abanye abantu, kwaye ijolise ekusebenziseni uvelwano nokungazithembi xa ujongene nobunzima.
Olona hlobo luguqulelweyo lwangaphambili lomqondiso we-anchor lwalunxitywa ngamaKristu abaleka intshutshiso yamaRoma ngexesha emva kokubethelelwa emnqamlezweni; umnqamlezo wawusetyenziselwa ukuchonga abo bazinikela kunye nabo.
I tattoo yomnqamlezo ebambekileyo yamkelwe ngamaKristu kunye nabathunywa bevangeli njengomboniso wozinzo nokunyamezela. Iitatoo ezinqamlezileyo ezincinci zifumaneka ezihlahleni, emaqatheni, njenge tattoo esifubeni okanye kwezinye iindawo ezifihlakeleyo ukubonisa ukuzinikela kwabo ekuncedeni abo basweleyo.
8. Iingcamango zeTattoo zeBaseball Cross
Bona ngakumbi malunga - 20 IiTattoos zomnqamlezo zeBhola
I-baseball cross tattoos zikukhuthaza ukuba ujoyine iparadise yomphanda okanye inqaba yokubetha. Akukho ndlela yakukuqhankqalaza nenye yezi zinto zintle zibonisiwe!
Ezi zinto zidaliweyo zidibanisa uThixo kunye nokholo kwimidlalo yesizwe yaseMelika, zibonakalisa inkcazo yomtsalane wethamsanqa.
Ubume be-baseball be-baseball buhlala bufakwa kubumnandi bomnqamlezo wentsimbi ukwenza iintlobo ngeentlobo zemibono ye-inki yezemidlalo.
9. IiTattoos zomnqamlezo wesiNtu
Bona ngakumbi malunga - IiTattoos eziPhezulu ezingama-51 eziPhezulu zeMveli
Uyilo lomnqamlezo lubonelela ngothotho lwamathuba okwenza iitatoo ezizezomfuziselo, ngakumbi kwisitayile esinefuthe laseMelika sokuthambisa
Kukho iitayile ezinkulu zaseMelika zaseMelika onokuzenza okanye uzitolike, nokuba zivela kwimakhishithi eseludongeni kwivenkile ye tattoo okanye uyilo lwesiko osele usebenzile ukulizisa ebomini.
Kukwakho ukungahambelani ngaphakathi kwisitayile sendabuko, ukusuka kwi-inki emnyama enzima, ukuya kwiiphalethi zombala ezinqamlezileyo kunye nolwandiso olungqindilili, okanye nokuqaqamba kunye nokuyila okungakumbi kokuyila kwendalo okuvumela izinto ezintsha ezivela kumzobi we tattoo kunye nokubekwa okunokwenzeka, njengomnwe, ubuso, kunye nomvambo wentamo.
10. IiTattoos zeRosari
Bona ngakumbi malunga - Iingcamango eziphezulu ze-103 zeRosary Tattoo
Irosari inamaqhina akhethekileyo kumasakramente oxolelaniso kunye nokuvuma izono.
Ngexesha lenkqubo yoxolelo, iirosari ekukuhlambululeni kwisono ngelixa uhlaziya uthando ngoYesu Krestu. Ewe kunjalo, isebenza njengobungqina ngothando nenceba uYesu ekufuneka ayibuyisele.
Nangona kunjalo, ngaphandle kwenjongo yayo, unokumangaliswa kukwazi ukuba olu phawu lungcwele luguqulela kwisithsaba seentyatyambo ngesiLatin. Kuyavakala xa ucinga ukuba ubuhlalu bokuqala obufunyenwe kwirosari benziwe ngamagqabi eentyatyambo.
irhamncwa lakhe uyilo lwe tattoo lobuhle
11. IiTattoos zoMnqamlezo woLuntu
Umthombo: @ 2braveart nge-Instagram
Umthombo: @ franco.francischastey nge-Instagram
Umthombo: @tattooist_wolae nge-Instagram
Umthombo: @tattoosby_ak nge-Instagram
Umthombo: @vrodtattoos nge-Instagram
Umthombo: @ gallery55tattoos_rotorua nge-Instagram
Bona ngakumbi malunga - Iingcamango eziphezulu zeTattoo zoMnqamlezo wama-67
Uyilo lomvambo weTribal lube luhlobo olunomdla lwe-inki esekwe ekuzibonakaliseni.
Ngelixa uninzi lunxulunyaniswa nobuKrestu, izimvo zomnqamlezo wesizwe zithatha iikhonsepthi ezizezinye ngaphezulu kweetattoos zomnqamlezo ezilula kwi-inki emnyama.
Akukho iipateni ezithile zomnqamlezo wesizwe; uyilo, ukubekwa, kunye nesimbo somnqamlezo esisetyenzisiweyo kuxhomekeke ngokupheleleyo kukhetho lomntu oqokelela itattoo.
Oku kuvumela umxholo ukuba ube nenkululeko enkulu kwisitayile.
iinkuni kutshintsho lomgangatho wethayile
imifanekiso yokulungisa umhlaba ngamatye
ukholo nge tattoo yomnqamlezo
Iitattoo ezincinci ze-irish zabafazi
uYesu kwisandla esiphambanweni se tattoo
Iingcamango zethayile yomgangatho weshawa
Umzobo wekoi fish tattoo sleeve